8 N’ụbọchị ndị ahụ, mgbe e nwere ìgwè mmadụ buru ibu ọzọ, ha enweghịkwa ihe ha ga-eri, ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya wee sị ha:+
2 “Enwere m ọmịiko+ n’ebe ìgwè mmadụ a nọ, n’ihi na ka ọ dị ugbu a, mụ na ha anọwo ruo ụbọchị atọ, ha enweghịkwa ihe ha ga-eri;
3 ọ bụrụkwa na mụ asị ha lawa n’ụlọ ha n’agụụ, ha ga-ada mbà n’okporo ụzọ. N’ezie, ụfọdụ n’ime ha si ebe dị anya.”
4 Ma ndị na-eso ụzọ ya zara ya, sị: “Ebee ka mmadụ ga-esi nweta achịcha ga-eju ndị a afọ n’ebe a dịpụrụ adịpụ?”+
5 Ma ọ jụrụ ha, sị: “Ogbe achịcha ole ka unu nwere?” Ha sịrị ya: “Asaa.”+
6 O wee gwa ìgwè mmadụ ahụ ka ha nọdụ n’ala. O wee were ogbe achịcha asaa ahụ, kelee Chineke,+ nyawaa ha, malite iwere ha na-enye ndị na-eso ụzọ ya ka ha kesaa, ha wee were ha kesaara ìgwè mmadụ ahụ.+
7 Ha nwekwara obere azụ̀ ole na ole; mgbe ọ gọzichara azụ̀ ndị a, ọ gwara ha ka ha kee ha.+
8 Ha wee rie ihe oriri, rijuo afọ, ha wee tụtụkọta ihe ha rifọrọ erifọ, o juru nkata asaa.+
9 Ma e nwere ihe dị ka puku ndị ikom anọ. N’ikpeazụ, ọ sịrị ha lawa.+
10 Ozugbo ahụ, ya na ndị na-eso ụzọ ya banyere n’ụgbọ wee bata ná mpaghara Dalmanuta.+
11 N’ebe a, ndị Farisii pụtara wee malite ịrụ ya ụka, na-achọ ka o gosi ha ihe ịrịba ama si n’eluigwe, iji lee ya ule.+
12 Ya mere, ọ sụrụ ude+ na mmụọ ya, sị: “Gịnị mere ọgbọ a ji na-achọ ihe ịrịba ama? N’eziokwu, ana m asị, A gaghị enye ọgbọ a ihe ịrịba ama ọ bụla.”+
13 O wee hapụ ha, banyeghachi n’ụgbọ, ma gaa n’ikpere mmiri dị n’ofe nke ọzọ.
14 Otú ọ dị, ha chefuru iwere achịcha, e wezụgakwa otu ogbe achịcha, ọ dịghị ihe ha nwere n’ụgbọ mmiri ahụ.+
15 O wee malite inye ha iwu n’ụzọ doro anya, sị: “Ghewenụ anya unu oghe, lezienụ anya maka ihe iko achịcha nke ndị Farisii nakwa maka ihe iko achịcha nke Herọd.”+
16 Ya mere, ha malitere ịrụrịta ụka maka na ha ejighị achịcha.+
17 Mgbe ọ matara nke a, ọ sịrị ha: “Gịnị mere unu ji arụ ụka maka na unu ejighị achịcha?+ Ùnu amatabeghị, ùnu aghọtabeghịkwa ihe ọ pụtara? Ọ̀ na-esiri obi unu ike ịghọta ihe?+
18 ‘Ùnu adịghị ahụ ụzọ, ọ bụ ezie na unu nwere anya; ùnu adịghịkwa anụ ihe ọ bụ ezie na unu nwere ntị?’+ Ùnu echetaghị,
19 mgbe m nyawaara puku ndị ikom ise ahụ ogbe achịcha ise+ ahụ, nkata ole ka unu tụtụjuru achịcha e rifọrọ erifọ?” Ha sịrị ya: “Iri na abụọ.”+
20 “Mgbe m nyawaara puku ndị ikom anọ ahụ ogbe achịcha asaa ahụ, nkata ole ka unu tụtụjuru achịcha e rifọrọ erifọ?” Ha wee sị ya: “Asaa.”+
21 O wee sị ha: “Ùnu aghọtabeghị ihe ọ pụtara?”+
22 Ha wee banye Betseida. N’ebe a, ndị mmadụ kpọtaara ya otu nwoke kpuru ìsì, ha rịọsikwara ya arịrịọ ike ka o bitụ ya aka.+
23 O wee sere nwoke ahụ kpuru ìsì n’aka, kpọrọ ya pụọ n’obodo nta ahụ, mgbe ọ gbụsasịrị ya ọnụ mmiri+ n’anya, o bikwasịrị ya aka wee malite ịjụ ya, sị: “Ò nwere ihe ị na-ahụ?”
24 Nwoke ahụ wee lelie anya ma malite ịsị: “Ana m ahụ ndị mmadụ, n’ihi na ana m ahụ ihe yigasịrị osisi, ma ha na-ejegharị ejegharị.”
25 O wee bikwasị nwoke ahụ aka n’anya ọzọ, nwoke ahụ wee hụwa ụzọ nke ọma, e wee gwọọ ya, o wee na-ahụ ihe niile nke ọma.
26 O wee sị ya lawa, sịkwa ya: “Ma abanyela n’obodo nta a.”+
27 Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya wee gawazie obodo nta ndị dị na Sesaria Filipaị, mgbe ha nọ n’ụzọ, ọ malitere ịjụ ndị na-eso ụzọ ya ajụjụ, sị ha: “Ònye ka ndị mmadụ na-asị na m bụ?”+
28 Ha sịrị ya: “Jọn Onye Na-eme Baptizim,+ ndị ọzọ na-asịkwa, Ịlaịja,+ ma ndị ọzọ na-asị, Otu n’ime ndị amụma.”+
29 O wee jụọ ha, sị: “Ma unu onwe unu, ònye ka unu na-asị na m bụ?” Pita zara ya, sị: “Ị bụ Kraịst.”+
30 Ya mere, o nyesiri ha iwu ike ka ha ghara ịkọrọ onye ọ bụla banyere onwe ya.+
31 Ọ malitekwara ịkụziri ha na Nwa nke mmadụ ga-ata ọtụtụ ahụhụ, na ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ ga-ajụkwa ya, na a ga-egbukwa ya,+ na ọ ga-ebilikwa mgbe ụbọchị atọ gasịrị.+
32 N’ezie, ọ nọ na-ekwu okwu ahụ n’ezoghị ọnụ. Ma Pita kpọpụrụ ya n’akụkụ wee malite ịbara ya mba.+
33 Ọ tụgharịrị, lee ndị na-eso ụzọ ya anya ma baara Pita mba, sị: “Gaa m n’azụ, Setan, n’ihi na ihe ndị ị na-eche abụghị echiche Chineke, kama nke mmadụ.”+
34 O wee kpọọ ìgwè mmadụ ahụ na ndị na-eso ụzọ ya ka ha bịakwute ya, o wee sị ha: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n’azụ, ya jụ onwe ya ma bulie osisi ịta ahụhụ ya, na-eso m mgbe niile.+
35 N’ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta mkpụrụ obi ya ga-atụfu ya; ma onye ọ bụla nke tụfuru mkpụrụ obi ya n’ihi m nakwa n’ihi ozi ọma ahụ ga-azọpụta ya.+
36 N’ezie, olee uru ọ baara mmadụ irite ụwa dum n’uru ma tụfuo mkpụrụ obi ya?+
37 N’ezie, gịnị ka mmadụ ga-eji gbanwere mkpụrụ obi ya?+
38 N’ihi na onye ọ bụla ihere m na ihere okwu m na-eme n’ọgbọ a nke na-akwa iko,* nke na-emekwa mmehie, ihere onye ahụ ga-emekwa Nwa nke mmadụ+ mgbe ọ ga-abịarute n’ebube nke Nna ya, ya na ndị mmụọ ozi dị nsọ.”+
^ Mk 8:38*
Ma ọ bụ, “na-ekwesịghị ntụkwasị obi n’ebe Chineke nọ.”
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D41%26Chapter%3D8%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl